HP Pavilion X360-14-DH1023TX Silver (i5-10th Gen)-1 ~ ICT.com.mm
HomeHP Pavilion X360-14-DH1023TX Silver (i5-10th Gen)-1
HP Pavilion X360-14-DH1023TX Silver (i5-10th Gen)-1
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Size: 14″ (1366 × 768) WLED-Backlit Touch Screen Panel Type: Anti Glare CPU: Intel Core i5-10210U (1.6GHz up to 4.2GHz Turbo Boost,6MB Cache) RAM: 8 GB DDR4-2666 SDRAM HDD:... [Learn more]
Brand: HPSKU: 152732N/ASee more: Computer Systems, HP, Laptops / Notebooks, Products, Recent UpdatesFilter by: 2-in-1 Laptops, USD
Size: 14″ (1366 × 768) WLED-Backlit Touch Screen
Panel Type: Anti Glare
CPU: Intel Core i5-10210U (1.6GHz up to 4.2GHz Turbo Boost,6MB Cache)
Graphic: NVIDIA GeForce MX1302GB
Type-C 3.1 × 1 , USB 3.1 ,Camera, HDMI
Battery: 3-Cell Battery 41 Wh Li-ion
Note ထုတ်လို့ရ၊ Drawing လုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ Touchscreen Laptop တစ်လုံးကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် Processing Power မြင့်မြင့်နဲ့ သီးသန့်ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပါတဲ့ HP Pavillon X360 (i5-10 th ) Gen Latop လေးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 14” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ Resolution က HD (1366x768) Resolution ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ WLED-Backlit Touch Screen အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် Touch အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ချောမွေ့လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ Touch Screen အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Anti-glare နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် Note ရေးချိန်နဲ့ပုံဆွဲချိန်မှာ အလင်းပြန်နေလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ CPU အဖြစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် i5-10 th Gen Processor ကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိမှာပါ။ RAM အတွက် (DDR4, 2666 MHz)RAM 8G ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲအမြင့်တွေကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာအမြောက်အများ သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် 1TB ပမာဏရှိတဲ့ HDD ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ Drawing ပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သီးသန့်ဂရပ်ဖစ်ကတ်လိုအပ်တဲ့အတွက် NVIDIA GeForce MX1302GB ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကီးဘုတ်ရဲ့ ကီးတွေက ကြွပ်ဆတ်တဲ့ကီးမျိုးမဟုတ်ဘဲ Typing ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ Key တွေကိုသာ တပ်ဆင်ပေးထားလို့ ကောင်းမွန်တဲ့ Typing Experience ကို ရရှိစေမှာပါ။ OS အနေနဲ့ Windows 10 Home နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ Display လို External Devices တွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ USB Type-C Port လေး ပါဝင်လာပါတယ်။ USB 3.1, Web Cam, HDMI, (Multi-format) SD Card Reader တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ဘတ္ထရီအတွက်ကိုတော့ 3-Cell Battery 41 Wh (Li-ion) ဘတ္ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ရုံးသွားချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားလာချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် စမတ်ကျကျ သယ်သွားနိုင်ဖို့အတွက် HP Original Bag လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
The hood of the Pavilion x360 is slathered inawarm gold paint, and stamped at the center isareflective HP logo. The edges of the hood and the deck curve outward and then inward as they meet each other, creating an hourglass design that surrounds the Pavilion x360. There's alsoaPavilion logo on the hinge of the laptop.
Unfortunately, the Pavilion x360 doesn't have stellar battery life. After it continuously surfed the web over Wi-Fi at 150 nits of brightness, the battery survived for6hours and 17 minutes, which is just below the 6:39 mainstream laptop average.